Ukusasazwa kweLinux eLinux kwiLikhompyuter ezindala | Iindaba zeGajethi
Ngaphandle kwezibonelelo ezinikezelwa ziinkqubo zokusebenza ezisekwe kwiLinux, namhlanje kunzima kakhulu ukufumana izixhobo ezibheje ngokungaboni. Kwiminyaka embalwa edlulileyo, iMozilla yayisebenza kwiprojekthi yokuqalisa inkqubo yokusebenza esekwe kwiLinux yee-smartphones, kodwa iprojekthi yashiywa ngamaqonga awayeyixhasa ekuqaleni ukuze ibone oko ibingenandawo kule ecosystem yanamhlanje, apho i-iOS kunye ne-Android ngookumkani.
I-Linux ibisoloko ibonakaliswa ngokuziqhelanisa nawo nawuphi na umatshini, enyanisweni, okwangoku sinokufumana kwintengiso inani elikhulu lonikezelo lwalo naluphi na uhlobo lwekhompyuter, nokuba indala kangakanani kwaye ayiprintwanga. Kule nqaku siza kukubonisa I-10 yezona zinto zihamba phambili zeLinux kwiikhompyuter ezindala.
Kolu luhlu ayizizo zonke, kwaye ayizizo zonke ezikhoyo, ke ukuba ufuna ukufaka igalelo kwiminikelo yakho, uyamenywa ukuba wenze njalo kumagqabantshintshi eli nqaku. Zonke ii-distros endizichazayo apha ngezantsi Ziya-odolwa ngokweemfuno ezisezantsi zelowo nalowo, ukwenza kube lula ukufumana ukuba yeyiphi enokuba nendawo engcono kwikhompyuter yethu yakudala, le sinayo ngaphezulu kwekhabethe, okanye kwigumbi lokugcina kuba sibuhlungu ukuyilahla.
1.1 Iimfuno zePuppy Linux
2.1 Iimfuneko zeKnmix
3.1 Iimfuno zePorteus
4.1 Iimfuno zeTinyCore
5.1 Ubuncinci beemfuno ze-AntiX
6.1 Iimfuno zikaLubuntu
7.1 Xubuntu iimfuno
8 I-Pear OS / iClementine OS
8.1 Pear OS iimfuno
9.1 Iimfuno zokuqala ze-OS
10 I-Linux Lite
10.1 Iimfuno zeLinux Lite
I-Puppy Linux lolunye lonikezelo olufuna ukuba oovimba abancinci basebenze ngokufanelekileyo. Isinika iimeko ezahlukeneyo zedesktop, Inani elikhulu lezicelo ezifakwe ngaphambili ukongeza ekubeni newebhusayithi esemthethweni yokusombulula naluphi na uhlobo lwamathandabuzo ngokusebenza okanye ukufakwa kwayo. Ikwasivumela ukuba siqale iPC yethu kwiCD okanye ipendrive, ukongeza ekubeni sikwazi ukuyifaka ngqo kwihard drive yekhompyuter yethu. Inguqulelo yamva nje yePuppy Linux yinombolo 6.3.
Iimfuno zePuppy Linux
Iprosesa ye-486 okanye ngaphezulu.
I-RAM ye-64 MB, i-512 MB iyacetyiswa
Khuphela iPuppy Linux
I-KNOPPIX yingqokelela yesoftware ye-GNU / Linux, ibaleke ngokupheleleyo kwiCD, DVD okanye kwi-USB drive. Fumana ngokuzenzekelayo kwaye ngu iyahambelana kuluhlu olubanzi lweeadaptha zemizobo, amakhadi esandi, izixhobo ze-USB kunye nezinye izixhobo Awudingi ukufaka nantoni na kwihard drive. Le nguqulo isinika usetyenziso oluninzi apho sifumana i-GIMP, LibreOffice, Firefox, isidlali somculo ...
I-120 MB ye-RAM, i-512 iyacetyiswa ukuba sisebenza ngezicelo ezininzi.
Ngama-300 MB nje, iPortus iyasivumela ukuba sikhethe phakathi kwemo eyahlukileyo yemizobo enje ngeMATE, Xfce, KDE ... Ilungele i- phakathi kwe-90s iikhompyuter ngenxa yeemfuno eziphantsi eziyifunayo. Inguqulelo yamvanje ekhoyo yinombolo 3.2.2 eyakhutshwa ngoDisemba wonyaka ophelileyo.
I-256 MB yemeko yemizobo ye-RAM-40 MB kwimowudi yokubhaliweyo
I-Tinycore sisasazo esisebenzisa i-kernel ye-Linux kunye nezandiso ezenziwe luluntu. Isinika indawo ezahlukeneyo zemizobo kunye ayikhuthazwa kubasebenzisi abafuna ukungena kwiLinux, kuba ufakelo lunzima ngakumbi kunesiqhelo. Ngexesha lenkqubo yokufaka, sinokukhetha ukuba zeziphi izicelo esifuna ukuzifaka kwaye zeziphi ezingekhoyo. Kodwa olu khetho lithetha ukuba ngokwendalo akubandakanyi nasiphi na isikhangeli kunye neprosesa yamagama. Nangona igama layo linokubonisa ngenye indlela, iTinyCore ilungele bonke abasebenzisi abathanda ukwenza ngokwezifiso uguqulelo lweLinux ukuya kuthi ga.
Iprosesa ye-486 DX
I-AntiX yenye yolwabiwo lweLinux efuna iimfuno ezimbalwa, zombini kunyen ngokweprosesa ngokwe-RAM, ukuze sikwazi ukuyifaka kwiikhompyuter ezininzi ukusukela emva kweminyaka yama-90. I-AntiX ibandakanya usetyenziso olufakelweyo kwangaphambili kwiofisi yeLebreOffice, isikhangeli se-Iceweasol, umxhasi weposi yeClaws ... izicelo esinokuthi sisebenze ngazo kwidesktop esekwe kwi-GNOME. ebizwa ngokuba yi-IceWM.
Ubuncinci beemfuno ze-AntiX
I-RAM ye-64 MB, i-128 MB iyacetyiswa.
Olunye lweempawu ezenza ukuba uLubuntu abe lolunye lwezona zisasazi zibalaseleyo kwiikhompyuter ezingenamandla afunyenwe kuhlaziyo luhamba noBuntu, kuba ngenene Ubuntu obunendawo ye-LXDE yedesktop eyilelwe iikhompyuter ezinesixhobo esisezantsi. Enkosi kuluntu olusemva ko-Ubuntu, asisoze sibe nangxaki ngokwenkxaso, uhlaziyo, izixhobo, usetyenziso ... Iyafumaneka kwiikhompyuter ezingama-32-bit kunye nee-64-bit zeekhompyuter.
IPentium II, iPentium III iyacetyiswa
I-192 MB ye-RAM
Asikwazanga ukukhankanya uLubuntu kwaye silibale malunga nomntakwabo omdala, uXubuntu, ukuhanjiswa koBuntu kunye nemeko ye-desktop yeXfce. Ngokungafaniyo noLubuntu wakho, Iimfuneko zeXubuntu ziphakame ngandlela ithile, kodwa igqibelele kwiikhompyuter ezinezixhobo ezimbalwa.
IPentium III, iPentium IV iyacetyiswa
Isantya senkqubo: 800 MHz
I-4 GB yendawo kwi-hard drive yethu.
I-Pear OS / iClementine OS
Ayizizo zonke iiLinux ezisasaziweyo ezifanayo. I-Pear OS iyasinika ubugcisa obufanayo nobo bufunyenwe kwinkqubo yokusebenza ye-Apple MacOS. Ngelishwa iminyaka embalwa asinakufumana ngokusesikweni olu lwabiwo ukuba silukhuphele, ke kuya kufuneka sijonge kwezinye iiseva. Ufakelo lunokwenziwa kwiCD, iDVD okanye ngependrive.
Pear OS iimfuno
Idiski enzima eyi-8 GB
Enye ye-distros eye yafumana ukuthandwa kakhulu kule minyaka idlulileyo ngumbulelo osisiseko kwimithombo ephantsi eyifunayo, nangona singenakho ukuyifaka kwiikhompyuter ukusukela emva kweminyaka yama-90s, kodwa kuleyo ikwiminyaka eli-10 ubudala ngaphandle kwengxaki. Ujongano lomsebenzisi luyafana ne-macOS, ke ukuba ubukhangela endaweni yePear OS okanye iClementine OS sisisombululo sakho.
Iimfuno zokuqala ze-OS
Inkqubo ye-1 GHz x86
I-5 GB yendawo yediski enzima
CD, DVD okanye USB port yokufunda ukufakela.
Khuphela i-OS yokuqala
I-Linux Lite isekwe kwi-Ubuntu kwaye inenani elikhulu lezicelo ezisetyenzisiweyo ezinje ngesikhangeli seFirefox, iOfisi yeLibre, isidlali seVLC, umhleli wemizobo yeGIMP, umxhasi weposi weThunderbird ... Indawo yemizobo iya kusikhumbuza ujongano yeWindows XP okanye ukuba ubukhe wasebenzisa le nguqulo yeWindows, ayizukuhlawula ukuba uziqhelanise ngokukhawuleza. Ngaba iyafumaneka kwiikhompyuter ezingama-32-bit kunye ne-64-bit.
Iimfuno zeLinux Lite
Inkqubo ye-700 MHz
Imizobo 1.024 x 768
Khuphela iLinux Lite
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ukuhanjiswa okulula kweLinux
Enkosi ngolwazi, wenze kakuhle